Italy: : Nin xagjir ah oo muhaajiriin Afrikaan ah ku dhaawacay rasaas – Kasmo Newspaper
Italy: : Nin xagjir ah oo muhaajiriin Afrikaan ah ku dhaawacay rasaas
Updated - February 3, 2018 9:28 pm GMT
London (Kasmo), Boliiska Talyaaniga ee magaalada Macerata ee Gobolka Marche ayaa saaka xabsiga dhigay Luca Traini oo 28 jir ah ka dib markii uu rasaas ku dhaawacay, isaga oo si gaar ah bartilmaameed uga dhiganaya, muhaajiriinta madowga ah.
Boliiska ayaa sheegay in ninkaan oo ka tirsan kooxaha madaxa xiiran ee xagjirka midigta fog ah uu waxyeello soo gaarsiiyay dukaammo iyo dhismayaal kale, isga oo rasaas ka ridaya gaarigiisa, khalkhalna galiyay nabadgalyada.
Dadka uu dhaawacyada khafiifka ah gaarsiiyay waa 6 qofood oo Afrikaan ah kana soo jeeda dalalka Mali, Nigeria iyo Ghana.
Aagga toogashadu ka dhacday waa isla xaafadda ay ka socoto baarista gabar 18 jir ahayd oo la dilay 3 maalmood ka hor, meydkeedana la helay 31kii Jenaayo, iyada oo la jarjaray laguna guray 2 sanduuq, dambi-baarayaashu waxay rumaysanyihiin dhacdadu mid xiriir la leh, aargoosina ku dhisan.
Pamela Mastropietro oo reer Rome ahayd waxay maalintii Isniinta, 29kii Jenaayo ka soo baxsatay xarun dhaqancelin loogu sameeyo dadka maandooriyaha qabatimay (Drug Addicts), laguna magacaabo Corredonia ‘Pars’ Recovery Community’ oo 8 km u jirta Macerata.
Dilka gabadhaan, oo dad aqoon u lahaa sheegeen in ay maandooriye isticmaali jirtay, ayaa loo qabtay Innocent Osenghale oo 29 jir ah una dhashay Nigeria, horeyna u lahaa dunuub ay ka mid yihiin ganacsiga maandooriyaha.
Warbaahinta Talyaaniga iyo goobaha siyaasadda ayaa dhammaantood dhacdadaan laga hadal hayaa iyada oo kooxaha shisheeyaha neceb uga faa’ideysanayaan, ololohooda doorashooyinka dhici doona 4ta March, dhaleecaynta muhaajiriinta madowga ah ee ku soo badanaya dalka.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Talyaaniga, Marco Minniti, oo Macerata kula hadlaya Guddiga Nabadgalyada ayaa caddeeyay in dhibta dhacday looga hortagi karo oo qur ah wadajir iyo gacmaha oo la is qabsado oo aan loo baahnayn in khalad mid kale lagu saxo.
Luca Traini, ninka dadka dhaawacay oo Talyaani ah, waxaa Doorashooyinkii Maamullada ee 2017kii la sheegay in uu ka sharraxnaa Degmada Corridonia, Xisbiga ‘Lega Nord’ ee midigta fog, kaas oo barnaamijkiisa siyaasadeed ka mid yahay diidmada shisheeyaha.